Iindaba-Inkqubo yokuCoca isichumisi esihlanganisiweyo
Inkqubo yokucoca isichumisi esihlanganisiweyo
Izichumisi aziqhelekanga kumafama kwiinkalo ezininzi. Izixa ezikhulu zezichumiso ziyafuneka phantse minyaka le. Owona msebenzi wezichumisi kukuphucula iipropathi zomhlaba kunye nokuphucula ukuchuma komhlaba. Esinye seziseko ezibonakalayo kwimveliso yezolimo; Nangona kunjalo, iikhompawundi zezichumisi zibhekisa kwizichumisi zemichiza ezinezinto ezimbini okanye nangaphezulu zezakhi. Izichumisi ezihlanganisiweyo zinezibonelelo zomxholo ophezulu wezondlo, izinto ezimbalwa ezincedisayo kunye neempawu ezintle zomzimba. Kubaluleke kakhulu ukuchumisa okulinganiselweyo, ukuphucula ukusetyenziswa kwesichumiso, kunye nokukhuthaza izivuno eziphezulu nezizinzileyo. isiphumo
Iinkqubo eziqhelekileyo ze-granulation zesichumisi esimbaxa zezi: idrama yokwahlulahlula amanzi, i-disc granulation, i-granulation yokutshiza, i-granulation ephezulu yenqanawa, njl njl. Obu buchwephesha butshiza i-potassium ye-nitrogen-phosphate inyibilika ukusuka phezulu kwinqaba ye-granulation, kwaye iqokelela kwi-granules ngelixa ipholisa kwinqaba. Oku kukwabizwa ngokuba yi-melt granulation. Kumashishini okusetyenziswa kwe-nitrate ye-ammonium, kusetyenziswa ukunyibilika kwinqaba ephezulu. Indlela yokusebenzisa isichumisi esimbaxa inezi zinto zilandelayo:
Okokuqala, inokusebenzisa ngokuthe ngqo isisombululo se-ammonium nitrate, isuse isidingo senkqubo yokutshiza ye-ammonium nitrate isisombululo, kunye nokusebenza okutyumkileyo kwe-ammonium nitrate eqinileyo yokwenza isichumiso esimbaxa, esenza lula inkqubo yokusetyenziswa. Qinisekisa ukusetyenziswa okukhuselekileyo.
Eyesibini kukuba ukunyibilika kwenkqubo yokunyibilikisa i-granulation isebenzisa ngokupheleleyo amandla obushushu esisombululo esigxile kwi-ammonium nitrate, kwaye umxholo womswakama uphantsi kakhulu, ngenxa yoko akukho mfuneko yenkqubo ekruqulayo, egcina amandla kakhulu.
Okwesithathu kukukwazi ukusebenzisa i-nitrogen ephezulu, izichumisi ezixineneyo. Iimpawu zemveliso zinembonakalo egudileyo nengqukuva, ipesenti ephezulu yokupasa, akukho lula ukuyidibanisa, kwaye kulula ukuyinyibilikisa. Oku kuqinisekisa ukuba imveliso inethuba lokhuphiswano lomgangatho olomeleleyo kunye neendleko ezivela kwitekhnoloji yokusebenzisa.